Milateriga iyo Mucaraadka Suudaan oo Kala Saxiiday Heshiis Dastuuri ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Milateriga iyo Mucaraadka Suudaan oo Kala Saxiiday Heshiis Dastuuri ah
Milateriga iyo Mucaraadka Suudaan oo Kala Saxiiday Heshiis Dastuuri ah
Dhaqdhaqaaqa Dimoqraadiyada Sudan ayaa heshiis dastuuri ah oo rasmi la saxiixday gollaha Milateriga ee Dalkaasi. Heshiiskan ayaa awood qaybsi siyaasadeed oo lagu gaarayo dowlad rayid.
Heshiiskan wuxuu dhigayaa in labada dhinac ay sameeyaan xukuumad wadaag ah iyo golle barlamaan.gollahan ayaa xukumi doona Suudaan muddo saddex sanno ah. Labada dhinaca ayaa heshiis hordhac ah gaaray bishii hore kadib cadaadis xoog leh oo Milateriga iyo mucaraadka kaga imaanayay beesha caalamka iyo wadamada gobolka.
Heshiiskan ayaa sidoo kale wuxuu imaanaya iyadoo toddobaadkii hore ciidamadu ay rasaas ku fureen arday mudaharaadaysay magaalada Cubayda, Lix qof ayaa shaqaaqadaasi ku dhimatay. Milateriga ayaa xabsiga dhigay 9 askari oo lagu eedeeyay inay rasaasta ku fureen ardayda.
Milateriga wadankaasi ayaa xukunkii ka tuuray madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo mudo 30 sanno ah ka talinayay dalkaasi, ka Dib markii banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo xukunkiisa ay ka dhaceen dalkaasi.